ယနေ့အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 11, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဖေဖော်ဝါရီလမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနေစဉ်တလျှောက်လုံးတနင်္ဂနွေနေ့တွေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခဲ့တယ် 2012 Superbowl ကော်မတီ။ Pat Coyle ကကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာငါဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့အတူတကွပူးပေါင်းဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ချက်အချို့ (နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတော်အတန်) ပေးခဲ့တယ်။ လူမှုရေးနှင့်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး အဲ့တာက Indianapolis ရဲ့နာမည်ကို web ပေါ်ကနေတစ်ဆင့်ရွေးချယ်ဖို့မြို့အဖြစ်ရွေးလိမ့်မယ်။
စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အင်ဒီဒေသခံများအားနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရရှိစေရန်ဝက်ဘ်တစ်ခွင်လုံးနှင့်ဒေသခံမီဒီယာဆိုဒ်များမှစီစစ်ထားသောအချက်အလက်များကိုလည်းထို site သည်စုစည်းထားသည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး Mark Miles ဦး ဆောင်သည့်စိတ်ကူးအသင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းခွဲပြီးအောင်နိုင် ... ငါတို့သည်ငါတို့ပြု! မာ့ခ်သည်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုမည်သို့စုစည်းရမည်၊ အောင်မြင်မှုအတွက်အတားအဆီးများကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်၊ သူ၏အလုပ်ကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ရန်သူအားအစွမ်းခွန်အားပေးသည်။
ဒီကနေ့မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဒုဥက္ကPresident္ဌ Michael Karnuta ဆီကလှပသောပြားကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့သည် Indiana ပြည်နယ်အားကစားကော်ပိုရေးရှင်း ငါထောက်ပံ့ပေးဘို့။ အဆိုပါပြားအမှန်တကယ်ပေါ်တွင်လည်းအေးမြ RCA Dome တစ်ခုစစ်မှန်အပိုင်းအစရှိပါတယ်!
အကယ်၍ သင်သည်အင်ဒီယာနာအားကစားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိပါကသင့်ဒေသတွင်နေထိုင်ပါကသင်လိုအပ်သည် ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပါ အဖွဲ့အစည်းနှင့်သင်၏ရ သင်၏အသင်း ၀ င်ရန်လည်းသင့်ကုမ္ပဏီ! လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ Indianapolis ကိုလာမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဒေသတွင်းကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်နှင့်ကြီးစွာသောအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိလိုလျှင် - ဤအဖွဲ့သည်ပူးပေါင်းရန်ဖြစ်သည်။
အင်ဒီယားနားအားကစားကော်ပိုရေးရှင်း၏အဖွဲ့ ၀ င်အဖွဲ့သည်အင်ဒီယားနားသို့ကြီးမားသောဖြစ်ရပ်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်များအတွက်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။ သင်၏အခွန်ကောက်ခံမှုမှအကျိုးခံစားခွင့်အတော်များများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ISC အဖွဲ့ ၀ င်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက Mike@Prezin ကို member@indianasportscorp.com သို့မဟုတ် (317) 237-5020 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ငါ့ကိုတွေ့ဖို့ဒီနေ့အချိန်ယူခဲ့တဲ့အတွက်မိုက်ကယ်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Mike သည်ဒေသကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ကွပ်မျက်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါ၌ရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်္ကေတပြုလုပ်ရန်အတွက်ကင်ရန်သစ်သားပြားများအိတ်တစ်လုံးထဲထည့်လိုက်သည် မီးထွန်း စီမံကိန်းအောက်မှာ။ Superbowl ရရှိခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာမိပါသည်။ သေချာသည်မှာ Peyton နှင့် Irsay တို့သည်လည်းကူညီနိုင်ခဲ့ကြပြီး Pat Coyle နှင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဤအခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒေသတွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုသယ်ဆောင်လာနိုင်ရန်မိုက်ကယ်နှင့်အခြားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ Indianapolis ရဲ့အပြင်ဘက်ကလူတွေအတွက် - ငါဟာငါတို့မြို့ကိုထိုးဖောက်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားတဲ့စီးပွားရေးအခြေပြုမြို့ကြီးကြီးတစ်ခုပါ။ Superbowl ရရှိရန်မည်သည့်နေရာတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်နိုင်သနည်း။
Tags: 2012 စူပါဖလားIndianapolisမိုင်မှတ်ပါRC အမိုးခုံးစူပါပန်းကန်လူမှုမီဒီယာsuperbowl
$ 299 သုံးပြီး Yahoo ကိုသင့်ဆိုက်ကိုတင်ပါ။
ဇွန်လ 14 ရက် 2009 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 30 မိနစ်
ဂုဏ်ပြုပါသည်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းက မင်းအတွက် ကံကောင်းတယ်။